Ukubiyelwa kwefama yelanga
IAmazon (NASDAQ: I-AMZN) namhlanje ibhengeze iiprojekthi ezitsha ezisetyenziselwa ubungakanani bomoya kunye nelanga e-US, Canada, Spain, Sweden nase-UK. Inkampani ngoku ineeprojekthi zamandla ahlaziyiweyo ezingama-206 kwihlabathi liphela, kubandakanywa iiprojekthi zomoya ezisebenzisa isikali ezingama-71 kunye neephahla elanga ezili-135 kumaziko nakwizitoro ...
Kutheni usebenzisa ucingo lweWeld?
Uhlobo lokubiyela olufakayo lumisela umgangatho wokhuseleko onokulindela. Ucingo olulula alunakwanela. I-Weld mesh, okanye uthango lweplanethi ebiyelweyo, luphezulu lwendlela yokukhusela umgca ekunika ukuzithemba okudingayo. Yintoni welding ucingo wocingo? Welding umnatha yi ...
Uyifaka njani ikhonkco lekhonkco
ANATOMY OF A LETYINI LWETYATHANGA UQINISEKISO INYATHELO 1 Bala ukuba zingakanani izinto ozifunayo ● Phawula indawo ngqo apho ufuna ukubeka khona ikona, isango kunye nezithuba zokugqibela ngepeyinti yokutshiza okanye into efanayo. ● Linganisa ubude bebonke phakathi kwezithuba zokugqibela. ● Ngoku uya kuba nakho uku-odola ubude o o ...
Usebenza njani uthango lwelanga?
- Izinto eziluncedo kunye nokusetyenziswa Yintoni ukubiyelwa kwelanga? Ukhuseleko lube sisifundo esibalulekileyo ngeli xesha lanamhlanje kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwepropathi kabani, izityalo, iikholoni, iifektri, njl njl. Ukubiyelwa kwelanga yindlela ephucukileyo nengahambelaniyo yenye ye ...